Ku celcelinta VIETNAMESE KHILAAFKA KHUDBADAHA, Foom Ficil Firfircoon - Quduuska ah Barashada Fiyatnaamiiska
2101 Views Nguyen Manh Hung
Fiyatnaam waxay horumarisay ilbaxnimada bariiska qoyan ee hore. Beeralleyda ayaa bilooyin iyo sannado ku qaatay beero bariiskooda u gaar ah. Rinjiyeynta “Chong cay, vo cay, con trau di bua"[Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa] (Ninku way qodaa, haweeneydu waa ay waraabsataa, digaagga biyaha ayaa jiidaya rake) (Sawirada 1,2) wuxuu jiray kumanaan sano oo dhan taariikhda dheer ee dagaalka si loo ilaaliyo loona ilaaliyo madaxbanaanida ummada heer kasta oo taariikhda ah. Intii lagu guda jiray ciidaha dhaqameedyada, had iyo jeer waxaa jiray ciyaaro jireed, halgan dhaqameed, kaas oo dadka ka caawiyay inay ku celceliyaan isku dheelitirka jirka iyo xoogga ay la kulmaan kuwa soo duulay.
Xuquuqda dhexe bartamihii qarnigii hore (Spring 40), Trung [Trưng] Walaalo waxay soo uruuriyeen ciidan ku filan oo ay ka adkaadaan cadowga, dalka xoreeyaan, sameystaan ​​dal madaxbannaan, oo caasimad u ah Me Linh [Mê Linh] (muddo saddex sano ah).
Waxaa kaloo ka mid ahaa jeneraalrada labada hoggaamiye ee haweenka ah, waxaa jiray haweeneyda guud ee la magacaabay Le Chan [Lê Chân] (Bien, Hai Phong [An Biên, Hải Phòng]), kaasoo dhidibada u taagay xarun ku tababbarta fanka dagaal, oo ay ku jirto halgan. Haweeney kale oo guud, Thieu Hoa [Thiề Hoa] (Lang Xuong [Lãng Xương], Vinh Phuc [Vĩnh Phúc]), ku tababaratay oo tababaray danh phet [đánh phết], kaasoo ku fiicnaa maskaxda iyo murqaha. Nguyen Tam Chinh [Nguyễn Tam Chinh], hogaamiye militari (Mai Dong [Mai Động], Thanh Hoa [Thanh Hoá]), wuxuu furay iskuul farshaxan oo loogu talagalay in lagu baro labadaba fanka dagaal iyo shiine (Jaantuska 3). Intaa ka dib, wuxuu noqday aasaasaha Mai Dong [Mai Động] tuulada halgan.
Qeybtii koowaad ee qarnigii saddexaad, waxaa jiray haween guud oo xoog badan oo loo yaqaan 'Lady' Triu [Triệu]. Markii ay jirtay 19 sano, waxay ku dhawaaqday: Waxaan kaliya rabaa inaan kaxeeyo dabaylo xoog leh, inaan duufayo mowjado culus, inaan ku dilo wabiga badda badda, inaan kaxeysto askarta Wu, in la sugo wabiyada iyo buuraha, oo aan harqo harqoodka ah. addoonsiga, ma aha inaan u sujuuda oo addoonsado!
Lady Triu [Triệu] wuxuu aasaasay dugsi faneed faneed si uu ugu dhaqmo lebbiska, isaga oo adeegsanaya seefo iyo qaanso si ay ula dagaallamaan cadaawayaasha, oo ahayd inay ku farxaan:
Way fududahay in la adeegsado waranka iyo dilidda shabeelka
In ka badan in la wajaho Boqoradda.
[Hoành qua đương hổzed
Qarnigii lixaad (543), Ly Bon [Lý Bôn], hogaamiyaha Thai Binh [Thái Binh] (Son Tay [Sơn Tây]), iyo geesiyaal kale oo waddaniyiin ah ayaa ku wada bartay fanka halgan si ay u kordhiyaan xoog jireed. Kuwaas waxaa ka mid ahaa hoggaamiyeyaal ciidan Trieu Quang Phuc [Triệu Quang Pulinc], Pham Tu [Phạm Tu], Ly Phuc Mang [Lý P iwosanc Mang]. Kacaankoodii waxay xornimo u heleen waddankeenna oo leh magaca Van Xuan [Vạn Xuân].
Bilowgii qarnigii siddeedaad, Ama Thuc Loan [Amaah Mai Thúc](722) u halgamay xornimada. Afartan iyo afar sano kadib, Phung Hung [Phùng Hưng] (766-791) iyo walaalkiis ka yar, Phung Hai [Phùng Hải], waxay soo ururiyeen ciidamadii dadka si ay ugu celceliyaan fanka dagaalka iyo howlaha kale ee jihada ee kacdoonka. Labada walaal ee aad bay u xooganaayeen. Phung Hung [Phùng Hưng] (Duong Lam [Đường Lam], Son Tay [Sơn Tây]) la dagaallami lahaa hafoolayaasha biyaha iyo garaacidda shabeelka. Phung Hai [Phùng Hải] waxay qaadi karaan kun-kilo dhagxan culus iyo doomo doomaha badan oo mayl ah. Labada walaal waxay ka adkaadeen duulaanka waxayna ilaalinayeen dhulka muddo toddobo sano ah waana la sharfay Bo Cai Dai Vuong [Bố Cái Đại Vương].
Sida lagu qoray diiwaanka taariikhda, qofka ku bixiyay tabaruc weyn si loo dhiso dugsi faneed faneed ballaaran oo ku yaal Duong Xa [Dương Xá] (Thanh Hoa [Thanh Hoá]) ahaa Duong Dinh Nghe [Dương Đình Nghệ]. Wuxuu ahaa hogaamiye tuulo soo urursaday ku dhawaad ​​3,000 oo dagaalyahan si ay u tababaro maalmaha fanka iyo habeenka. Waxaana ka mid ahaa Ngo Quyen [Ngô Quyền] (Phong Chau [Phong Châu], Son Tay [Sơn Tây]) oo markii dambe caan ku ahaa Bach Dang [Bạch Đằng] guul, taas oo soo afjartay kunkii sano ee xukunka Shiinaha (sida laga soo xigtay Dai Vietnam su ky toan thu [Đại Việt sử ký] (Annals oo dhameystiran oo ku saabsan Dai Vietnam [Đại Việt])).
(Booqday jeer 1,024, booqashooyinka 4 maanta)
Views Views: 2,026
← NATIIJADA ARRIMAHA GUUD - Meel aad u xun oo loogu talagalay ALLAHS of Arts Arts Martials - Qaybta 2
MUXUU Faransiisku qabsaday Vietnam sanadkii 1857? - Qaybta 1aad →
Comments Off ku saabsan CHỮ NÔM ama Qoraalkii Hore ee Fiyatnaamiis iyo Ku-biiridiisii ​​Hore ee Suugaanta Fiyatnaam - Qeybta 4